New Year ရန်ကုန် ကျိုက်က္ကစံပွဲက အသက်လုပြီး ပြေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ သူတစ်ဦးပြောပြတဲ့ အတွေ့အကြုံ…
New Year ရန်ကုန် ကျိုက်က္ကစံပွဲက အသက်လုပြီး ပြေးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ သူတစ်ဦးပြောပြတဲ့ အတွေ့အကြုံ… 2020 Countdown ကျိုက်က္ကစံပွဲက လူသတ်ပွဲပါ။ သေမလိုတွေဖြစ်ကြတဲ့ပွဲပါ ။တံခါးတွေလဲမဖွင့်ပေးကြဘူး ။တိုးကြ ကြိတ်ကြနဲ့ အရေးခင်းပွဲဖစ်နေသလိုပဲ ဖိနပ်တွေကိုကြည့်ပါ ဒါတောင် ကွင်းထဲမှာရိုက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး ကွင်းပြင်မှာပါ ခဲတွေနဲ့ပေါက်ကြ ပစ်ကြနဲ့ တကယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ကိူယ်တောင် ကံကောင်းလို့ လူပိမသေတာပါ …။ လူသတ်ပွဲတွေလည်း မြင်ခဲ့ရတယ် ခြေထောက်တွေလည်း ဖိနပ်ကျွပ်ခဲ့ပီး ပေါက်ပြဲ လူ ၆သိန်းတောင်ပါ …. ကြူံတဲ့လူတွေသိကြမှာပါ တစ်ယောက်ပေါ်တစ်ယောက်ကြော်ခွ ပြေးလွားနေကြတာ ရေးရင်းနဲ့တောင် ဒူးတုန်တယ် တော်ပါပီ နောက် free ပွဲဆို မကြည့်တော့ပါဘူး ကြောက်ပါပြီ …။ အက်မှာ ၁၂ထိုးပီးအပြင်ထွက်တော့ …
ယောကျာ်းကောင်းတွေနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရသူတွေပဲ ရရှိမယ့် အခွင့်အရေးနဲ့ ဂရုစိုက်မှုများ ယောက်ျားစစ်စစ်တွေလို့ သုံးလိုက်လို့ စိတ်မရှိစေချင်ဘူးဗျ။ ဒါပေမယ့် အခုခေတ်မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်အပေါ် ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူနဲ့မထိုက်တန်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လုပ်လုပ်သွားကြလို့ သူတို့တစ်တွေနဲ့ ကွဲပြားသွားအောင် ယောက်ျားကောင်း လို့ သုံးလိုက်ရတာပါ။ ဒါဖြင့် အမျိုးသမီးတွေကကော ယောက်ျားတွေကို နောက်ကောက် ချမသွားဘူးလား … မေးစရာရှိပါတယ် …. အဲဒါကိုလည်း ဒီနေရာကနေ ပြစ်တင်ရှုံ့ချလိုက်ပါတယ် … ။ သစ္စာရှိရှိ ချစ်သူတွေပေါများပါစေ … လက်တွဲခိုင်မာတဲ့ ချစ်သူတွေ ပေါများပါစေ ဆုတောင်းပေးရင် ကျွန်တော်နဲ့ ဘ၀တူအမျိုးသားတွေ ယောက်ျားစစ်စစ်တွေ အဖြစ် ဂုဏ်ယူကြမယ်ဗျာ … ။ ဒါနဲ့တစ်စပ်တည်းမှာပဲ auntymay ပရိသတ်ကြီးအတွက် …
လူတွေရဲ့အထင်သေးခြင်းကို မခံချင်ဘူးဆိုရင် အမြဲလှို့ဝှက်ထားသင့်တဲ့ အရာများ…
အမြဲလှို့ဝှက်ထားသင့်တဲ့ အရာများ… လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ပွင့်လင်းတဲ့သူဖြစ်ဖြစ် လျှို့ဝှက်ထားသင့်တဲ့အရာတွေ ရှိပါတယ်။ လျှို့ဝှက်သင့်တဲ့ အရာကို ထုတ်ပြလိုက်ရင် ကိုယ့်တန်ဖိုးလည်းကျသွားသလို၊ တစ်စိတ်ကိုတစ်အိတ်လုပ်တတ်တဲ့ သူတွေနဲ့သာ တိုးသွားရင် အပြတ်ပြတ်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်သကဲ့သို့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း ကျဆင်းရမှာပါ။ ဒါကြောင့် သင့်ဘဝမှာ လူတွေရဲ့ မထီမဲ့မြင်ပြုခြင်း၊ အထင်သေးခြင်းကို မခံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဒီအရာ (၅) ခုကို အမြဲလျှို့ဝှက်ထားပါနော်.. (၁) သင့်ရဲ့ အတွင်းအကျဆုံး အတွေးအခေါ် တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အများနဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့ သင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်၊ ခံယူချက်တွေကို အဲဒီ့အတိုင်းပဲထားလိုက်ပါ၊ တခြားသူကို ထုတ်ပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဥပမာ သေခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းမှာ သင်ကသေခြင်းက ပိုကောင်းတယ်လို့ ထစ်ထစ်ချယုံကြည်နေတယ်ဆိုရင်တောင် အဲဒါကို ထုတ်ပြောစရာမလိုပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သင့်အတွေးတွေဟာ တစ်ဖက်မှာ …
နှစ်ဦးမှာ တရားတော်နာယူရင်း ဒါနအလှူလုပ် ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး
အကယ်ဒမီ မင်းသမီးချောလေး ဖွေးဖွေး ကတော့ နှစ်ဦး မှာ တရားတော် လည်း နာယူရင်း ဒါန အလှူ လည်း လုပ်ရင်း ကုသိုလ် ယူခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်မှာတော့ နှစ်ဦး တရားအလှူတော် ဓမ္မသဘင်ကို ကျင်းပတာ (၂.၁.၂၀၂၀)နဲ့ ဆိုရင် ဒုတိယ နေ့ တိုင် ခဲ့ပါပြီ။ ဒုတိယ မြောက် နေ့မှာတော့ ဖွေးဖွေး က တရားတော်လည်း နာယူခဲ့သလို တရားပွဲ လာရောက်ကြသူတွေ အတွက် Sandwich အခု”၅၀၀” ကိုပါ ဝေမျှ လှူဒါန်း ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ဘုရားဟောပေးခဲ့တာတွေထဲမှ…ကိုယ်နားလည်သလို ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ အသင်းအဖွဲ့တခု နိုင်ငံတခုရဲ့အစိတ်အပိုင်းဘယ်ကဏ္ဍကမဆိုအသီးသီးဟာ ခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတခုချင်းစီလိုပဲ အားလုံး Equally Important …
အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေပြီး၊ မူဝေသလို၊ အိပ်ရေမဝသလိုဖြစ်နေရင်
အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေပြီး၊ မူဝေသလို၊ အိပ်ရေမဝသလိုဖြစ်နေရင် အားအင်ကုန်ခမ်းသလိုဖြစ်နေပြီး၊ မူဝေသလို၊ အိပ်ရေမဝသလိုဖြစ်နေရင် ဒီနည်းလေး စမ်းသုံး ကြည့်ပါ … ။ “အားအင်ကုန်ခမ်းမောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် မူးဝေခြင်းကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေသည့် ကြက်ဥသံပုရာဆမ်းဆေးတစ်ခွက်” အလုပ်ပင်ပန်းလို့ဖြစ်ဖြစ်၊အားအင်ကုန်ခမ်းလို့ ဖြစ်ဖြစ်၊မူးဝေနေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အလွယ်တကူ သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ဆေးနည်းတစ်လက် ကိုမျှဝေပေးပါ့မယ် … ။ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ (1) ကြက်ဥအစိမ်းတစ်လုံး၊ (2) သုံပုရာသီးအမှည့်တစ်လုံး၊ (3) သကြားဖြူဟင်းစားဇွန်းနှစ်ဇွန်းတို့ကိုဖေါက် ထည့်ရောမွှေပေးပါ။သံပုရာအစေ့တွေကိုဖယ်ရှားပစ်ပါ။ ပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်ရောမွှေ ပြီးသောက်ပေးရင်အမောအပန်းပြေပြီးအားရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် … ။ ဒီဆေးနည်းကကျွန်တော့်ဖခင်ပေးတဲ့ရိုးရာဆေး တစ်လက်ဖြစ်ပါတယ် … ။ သွေးအားနည်းသူတွေနဲ့ သွေးပေါင်ကျသူတွေပိုပြီးသုံးစွဲသင့်ပါတယ် … ။ အိပ်ရေးပျက်သူတွေအတွက်လည်းအားဆေးတစ်လက်ပါ။။ “ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ” Shwe La Thar Win Unicode အားအငျကုနျခမျးသလိုဖွဈနပွေီး၊ မူဝသေလို၊ အိပျရမေဝသလိုဖွဈနရေငျ …
သင် ကံေ ကာင်း ချင် တယ် ဆို ရင် ကျင့်ကြံ နေထိုင် သင့် တဲ့ နည်း လမ်း ( ၇ ) မျိုး…
သင် ကံေ ကာင်း ချင် တယ် ဆို ရင် ကျင့်ကြံ နေထိုင် သင့် တဲ့ နည်း လမ်း ( ၇ ) မျိုး… 1. Live in the present ပစ္စုပ္ပန်မှာပဲကိုယ့်စိတ်ကို နှစ်ထားပါ သင့်မှာရှိတာ ပစ္စုပ္ပန်တခုထဲဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ အတိတ်ဆိုတာ ပြီးသွားပြီ … ။ အနာဂတ်ဆိုတာ မရေရာတာတွေနဲ့ မရောက်လာသေးပါဘူး …. ။ သင့်လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှ သင့်ဘဝကို ပြောင်း လဲနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် … ။ 2. Show kindness တပါးသူကို မေတ္တာထားပါ အများအကျိုးရှိမှာလုပ်ပါ …
သင့်ကိုယ်သင် တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် … ဒီစာလေးကို ဖတ်ပါ
သင့်ကိုယ်သင် တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် … ဒီစာလေးကို ဖတ်ပါ (၁) သင့်အဆုတ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကို ရှောင်ပါ …။ (၂) သင့်ဓမ္မတာလာတဲ့အခါ တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ပဲစိမ်း စားပေးပါ။ (green beans to stop the period) ရပ်ချင်တဲ့အခါ စားရတာပါ …။ (၃) သင့်ဆီးလမ်းကြောင်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ကြက်သွန်နီကို အစိမ်းစားသုံးပေးပါ …။ (၄) သင့်ကျောက်ကပ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် နေ့ခင်းဘက်မှာ ရေများများသောက်ပြီး၊ ညဘက်မှာ ရေလျှော့သောက်ပါ …။ (၅) သင့်နှာခေါင်းကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ပူစီနံရွက်ကို ပုံမှန်စားသုံးပေးပါ …။ (၆) သင့် ကျောက်ကပ်ကို တကယ်ဂရုစိုက်တယ်ဆိုရင် ညအိပ်ရာမဝင်ခင် …
ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် password မပေးသင်တဲ့အကြောင်းရင်းများ…
ကိုယ့်ချစ်သူကို ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် password မပေးသင်တဲ့အကြောင်းရင်းများ… ချစ်သူရှိလာတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်ဆိုးတွေ ၊ ဟင်းချက်ညံ့တဲ့အကြောင်းတွေ ၊ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စအတော်များများကို ဖွင့်ဟပြောတတ်ကြပါတယ်။တချို့တွေဆိုရင်ချစ်သူနဲ့အတူသွားပွတ်တံတစ်ချောင်းထဲသုံးတဲ့အထိ ချစ်ကြတာမျိုးတောင်ရှိပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ပဲချစ်ရပါစေ Password ကိုတော့ မဝေမျှသင့်ပါဘူး …။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ RS တစ်ခုဆိုတာဟာ ယုံကြည်မှုပေါ်အခြေခံထားတဲ့ ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို သိပ်ယုံကြည်လို့ Password ပေးထားခဲ့ပေမယ့် ဒီယုံကြည်မှုကပဲ RS တစ်ခုကို အဆုံးသတ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။လေ့လာချက်အရ password သိထားတဲ့ သူ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာသူတို့ရဲ့ချစ်သူကို မသိစေပဲနဲ့ အကောင့်တွေထဲ ဝင်ရောက်သုံးစွဲတယ်ဆိုတာကို တွေ့ရှိထားရပါတယ် …။ ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်တွေဟာ နောက်ကျောကနေ ဓားနဲ့ထိုးမယ့်သူတွေ ပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပါ ။ တစ်ယောက်ယောက်က မသင့်လျော်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုခုပို့လိုက်တဲ့အခာမျိုးမှာ …
“မေသန်းနုထောင်ဒဏ်(၁)နှစ်ကျခံရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကြောင့် စိုးရိမ်နေကြတဲ့ အနုပညာရှင်ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ”
ပရိသတ်ကြီးရေ ဇန်နဝါရီလ(၂)ရက်နေ့မှာ ကြားသိခဲ့ရတဲ့ အကယ်ဒမီများဆုရှင် မင်းသမီးကြီး မေသန်းနုရဲ့ ငွေကြေးလိမ်လည်မှုနဲ့ ထောင်ဒဏ်(၁) နှစ်ကျမှတ်ခံရတယ်လို့ သတင်းကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဇင်ရော်မောင်မောင်မှ လက်ရှိမှာ ဇနီးဖြစ်သူအတွက် သူရောသားဖြစ်သူပါ ရင်နှင့်အမျှခံစားနေရတာကြောင့် အချိန်တန်မှသာ မီဒီယာများနှင့်တွေ့ဆုံကာ အကြောင်းစုံကို ပြောပြပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ကာ မေတ္တာရပ်ခံပြောသွားခဲ့ပါတယ်..။ အကယ်ဒမီဆုကြီးများစွာကိုသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီးကြီးတစ်ဦးအနေနဲ့ ဒီသတင်းကတော့ ပရိသတ်တွေအတွက် တအံ့တသြဖြစ်ကြမယ်ဆိုလည်းမမှားပါဘူးနော်။ပရိသတ်တွေသာမကပဲ အတူတူလုပ်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်ညီအစ်ကို မောင်နှမများပါ မယုံနိုင်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး အတူတူအမြဲအလုပ်တွဲလုပ်ဖြစ်တဲ့ အကယ်ဒမီများရှင် ရန်အောင်မှ “စိတ်မကောင်းဘူး အမြန်အဆင်ပြေပါစေ”ဆိုတဲ့ ပိုစ့်လေးရေးတင်ခဲ့ပါတယ်..။ ပိုစ့်ရဲ့အောက်မှာ တင်ဇာမော်၊ခိုင်သင်းကြည်နဲ့ စိုးမိုးကြည်တို့မှ မင်းသမီးကြီးအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ အစစအရာရာအမြန်အဆင်ပြေစေဖို့ကို ဆုတောင်းစကားလေးတွေရေးသွားခဲ့ပါတယ်…။ မင်းသမီးနဒီဝင့်နိုင်မှာလည်း စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့ မေသန်းနုရဲ့ သတင်းကြောင့် မယုံနိုင်ဖြစ်ကာ …
This Year : 100655
Total Users : 395788
Total views : 1427303